Inkonzo yabucala etyunjiweyo
Ukongeza kwiiNkqubo zeOfisi (ekwabizwa ngokuba yiNkqubo yeOfisi yoRhulumente), iiNkampani ziHlanganisiwe zibonelela ngenkonzo eyodwa yokukunika ungqameko olongezelelekileyo lwabucala kunye nokhuselo. Ukulungiselela ukukhusela abathengi bethu emehlweni okokukhetha, iiNkampani eziQokelelweyo zibonelela ngezethu Inkonzo yegama elityunjiweyo. Xa usayinela le nkonzo, siya kunika omnye wabahlobo bethu ukuba abamele kuwe njengamagosa kunye nabalawuli bombutho wakho. Le nkonzo ifumaneka kwi-Nevada kunye nee-Wyoming Corporations, kwaye inikezelwa nge- $ 500 kuphela ngonyaka. Otyunjiweyo kunye neNkqubo yeZiko leMithetho yeZomthetho apho umtyunjwa wethu anceda ngokudibana kwezinto kuphela yi- $ 1995 ngonyaka.
Xa kutyunjwe igosa elonyuliweyo okanye umlawuli, wena (mnikazi weninzi yesitokhwe) unokuhlala ugqibelele kwaye ulawulo olupheleleyo lweshishini lakho. Uyawagcina onke amalungelo atyikitye ngaphezulu kwazo naziphi na iiakhawunti zemali, ugcina ilungelo lokufaka naluphi na uhlobo lwamalungiselelo ezemali okanye okuqeshisa nelinye iziko, njl njl. Njengelinye istockholder, unganakho, nangaliphi na ixesha, ukuvota amagosa atyunjiweyo kwiqumrhu. ukuba ukhetha njalo. Ukongeza, njengoko kuchaziwe apha ngasentla, uwagcina onke amalungelo otyikityo kuzo zonke iiakhawunti zebhanki- iinkampani zakho ezichongiweyo ezihlanganisiweyo azichukumisi nayiphi na imali ehambelana nombutho njengoko zingenalo okanye igunya lokusayina kuzo naziphi na iakhawunti zenkampani. Bagcina nje ubumfihlo bakho ngokuzalisekisa iimfuno ezisemthethweni zenkampani yokuba negosa elinye okanye ngaphezulu.
Ngokwesiqhelo, abathengi bethu bayayalela iiNkampani, iiNkqubo zoMdibaniso weNkampani kunye neNkonzo yegama elityunjiweyo kunye njengephakheji. Ukuseka iNkampani kunye neNkqubo yeOfisi yoLawulo kunye neNkonzo yegama elityunjiweyo, ndwendwela iziko lethu le-odolo elikhuselekileyo.